माग्ने र दिपाको स्टेजमै हानाहान ! दिपाले माग्नेलाई स्टेजबाट खसाल्दिएपछी.. (भिडियो हेर्नुहोस) – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
admin 2017-09-19 समाचारLeaveacomment
छक्का पञ्जा २ को युनिट देशका विभिन्न शहरमा चलचित्रको प्रचारका लागि पुगिरहेको छ । यसैबीच मंगलबार पोखरा आएको छक्का पञ्जा २ को टोलीले आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए तर दिपा श्री निरौला र केदार घिमिरे माग्ने बुढाले हसाउदा हसाउदै रिसाएपछि हानाहानको स्थिति सृजना भयो । अन्ततः दिपाले माग्नेलाई स्टेजबाट तल खसाल्दीईन् । हेर्नुहोस उनिहरुको कमेडी कसरी सुरु भएको थियो त ? भिडियो तल उपलब्ध छ :